March 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Thanlay Ko shared ဟာသဗိမာန်-ဆရာသန်'s photo.
‘ဦးဦး… ပုံကြောချိန်ရောက်ပီရေ ကြောတော့’
ဒီကလေးနဲ့တော့ ခက်တယ်၊ သူ့အဖေကြီးငုတ်တုတ်ရှိရဲ့နဲ့ လူကိုပဲ လာလာဒုက္ခပေးနေတယ်
ကလေးနာမည်က ကြည်ဆွေတဲ့၊ ကျနော်ငှားနေတဲ့ အိမ်ရှင်ရဲ့ ကလေးလေးပါ
အသက်က ၄နှစ် ၅နှစ်လောက် ရှိပြီ။
စည်းနဲ့ စနစ် ပေါင်းစပ်ပါ
ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းဖို့အကန့် အသတ် အပိုင်းအခြားဆိုတာ ရှိတယ်။ အချိန်တွေ ဒလဟော မပေးထားဘူး။
ဒီကန့် သတ်ချက်ရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ စည်းဆိုတဲ့ အရာကို နားလည်ရမယ်။ စည်းတားထားခြင်း မရှိတဲ့ ဘ၀
ဟာ အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ လွတ်ထွက်နေတတ်တယ်။
ဆိုကြပါစို့ မိဘက သားသမီးကို ညချိန်(၁၀)နာရီနောက်ပိုင်း အပြင်မထွက်နဲ့ နော် ညည့်နက်ပြီ လို့ မှာထား
တယ်။ ဒါကို ကလေးတွေက နားမထောင်ဘူး ထွက်မယ်ဆိုရင် အမှောင်ကြားက အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတတ်တယ်။ ဒါက မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက စည်းလေး တစ်ခုပါ။
ယခင်က လှပနေတဲ့ ရုပ်ရှည်ကို ဂျပန်ကာတွန်းမလေးတွေလို မှေးစေ့ချွန်ချွန် အသဲပုံ ပုံသဏ္ဍာန် လိုချင်တာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါက အလွန်သန်မာတဲ့ သစ်ခုတ်သမားတစ်ဦးက သစ်ကုန်သည်တစ်ဦးထံ အလုပ်တောင်းရာ အလုပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခကြေးငွေလည်း ကောင်းမွန်သလို အလုပ်ခွင်အခြေအနေလည်း ကောင်းမွန် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သစ်ခုတ်သမားက အလုပ်ရှင်ကို အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
Aye Mya Ohn Khine
ဟိုတစ်နေ့က အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ မော်ဒယ်လ်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေး ပြရရင် သူတို့ အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တယားကမ်းခြေသွားလည်တဲ့ အကြောင်း။ပြောပုံက…“သိတယ်မို့လား..ဒီ Yangon Airport Departure မှာကတည်းကလေ Baggage တစ်လုံး ပျောက်တာဆိုတော့ နည်းနည်းလေး worries များသွားတာပေါ့နော်။
တခါတော့ တက္ကသိုလ်ထဲက သူငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ ချန် နဲ့ ဂျင်ဟာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ကို ကြိုးစာလုပ်ကိုင်ကြတာပေါ့။ တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့သူငယ်ချင်း ဂျင်ဟာ ရာထူးတက်သွားပြီးတော့ ချန် ကတော့ ရာထူးမဆက်ပဲရှိနေတယ်။
Soe Min March 30, 2014 at 10:42am
တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲကြော်ငြာထဲက ဖွေးဖွေးမောင်လေးလို “ပူတယ် အိုက်တယ်။ ပူတယ် အိုက်တယ်။ ပူတယ် အိုက်တယ်။” လို့အော်ပြီး စွေ့စွေ့ခုန် ပတ်ပြေးနေရမလား မသိပါဘူး။ ရန်ကုန်က တော်တော်အိုက်တာပဲ။ ဒါတောင် တပေါင်းကူးလို့ တန်ခူးကျွံရုံရှိသေးတာ။ တန်ခူးကုန်လို့ ကဆုန်ဆန်းတဲ့အခါ ဘယ်လိုနေမယ် မသိဘူး။ မှတ်သားမိသလောက် ရန်ကုန်ရဲ့ အပူဆုံးကာလတွေက ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းချိန်နားလောက်မှာ ရှိတယ်။ ဥတုကပဲ အပူကဲလာလို့လား ကိုယ်ကပဲ တောင်ကြိုတောင်ကြား အနေများခဲ့လို့ အအေးကြိုက်သွားတာလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ရာသီပူလာရင် ထမင်းမစားနိုင်တော့ဘူး။ ရေတွေချည့် လှိမ့်သောက်ပြီး ဗိုက်ကြီးကယ်နေရော။ ခါတိုင်း ထမင်းစားပြီး ရေတစ်ခွက်နဲ့ တင်းတိမ်တတ်သူကထမင်းမစားခင်ကတည်းက ရေတစွပ်စွပ်သောက် တာ ရေသန့် တစ်ဗူးနဲ့မလောက်တော့ဘူး။
၁။((( မော်စီတုန်းတရုပ်နှင့် အချုပ်၊အခြာ၊အာဏာ))))
သိန်းဖေမြင့် - မော်စီတုန်းတရုပ်နှင့် အချုပ်၊အခြာ၊အာဏာ
ဖြတ်လေးဖြတ် နည်းဗျူဟာနဲ့ ရန်သူကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းမယ်ဆိုတာ မြင်းလောင်းတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကစလို့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (BCP) နဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ုKNU) ကို ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ချေမှုန်း ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်က နိုင်ငံခြားဟာသတွေကို ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့ တချို့က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့မှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို ကျနော့် လာလာမေးကြတယ်။
'သန်၎ကိုတော့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ကောင်းရဲ့'... ဆိုတဲ့ အားကိုးတကြီးစိတ်နဲ့ လာကြတာ
ကြွားတယ် မထင်နဲ့... ပြောပြလိုက်မယ်... ..
Shin Thant May Myinttarshinmalay
ကျမသွားလည်မိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာပေါ့ ရွာဆိုပေမယ့် တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ တော်တော် ခေတ်မီနေပါပြီ။
မြို့ နဲ့ကလဲ အရမ်းမဝေးလှပါဘူး။
ကျမသွားလည်တဲ့ အိမ်က အဲဒီရွာလေးရဲ့
တောကျောင်းလေးနားမှာဆိုတော့ ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်မြင် မြင်ကွင်းကို မြင် နေရသလို စာအံသံတွေ တစ်ချိန်လုံး ကြားနေရပါတယ်။ ဘဝမျိုးစုံ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားလေးတွေက မပြည့်မစုံ ချို့ချို့ တဲ့တဲ့ ကြားက ပညာလိုချင်လွန်းလို့ လာသင်တဲ့ ကလေးတွေက များပါတယ်။ ဘဝတွေစုံသလို အကြောင်းတွေကလည်းများပြားလွန်းလှတယ်။ ကျမထင်မှတ်မထားမိဘူး။ဒီလိုတောရွာလေးမှာ ရိုးရိုးသားသား လူတွေပဲရှိလိမ့်မယ် ထင်မိတာပါ။
ဘဝမှာ ပျော်ပျော်နေထိုင် နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာက စိတ်နဲ့ ဆေးပညာ ဆရာဝန်များ ညွန်ကြားထားတဲ့ နည်းလမ်းကို ဘာသာပြန် မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
CreateaPlan for yourself ဘဝမှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပဲ ရှင်သန် နေထိုင်ရတာ ဘယ်လောက်တောင် ပျင်းဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဦးတည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိမှ လုပ်ကိုင်မှု ဘဝက အဓိပ္ပါယ်ရှိတာ ပျော်တာ။
ပြောလဲြေ့ပာပြီးပြါ့ပီ ကျုပ် ထပ်ပြောခြင်ရင် ရိုင်းတယ်လို.မထင်ပါနဲ ။ ခရစ်(ရှ) နား။ ဂေါတမ ဗုဓ္ဒ ၊ ယေရှု ၊ မိုဟာမက်နဲ ပညာရှိ လူကြီးသူမတွေ ပြောဆိုဆဲ့မတဲ စကားတွေ ထပ်တလဲလဲ ကြားနေရလို. နားညီး ပြီတောင် ယိုနေပါပြီဆိုရင် ။ဘယ်သူ.ကိုမှ မရိုသေ မလေးစား လို.မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ.ရင် ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေကို လက်တွေ ဖြေရှင်းဘို လိုအပ်နေတာ အမှန်ဘဲ . မဖြေရှင်းဘဲ အကြံမပြုဘဲ ၊သူများဟောပြီးသား တရားတွေသာ စွပ်ဟောနေရင်၊ တာဝန်ရှောင်ရာ ရောက်မယ်။ မယောင်ရာ ဆီလိမ်း တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ ဗျာ။
သူတို.တတွေ အားလုံး တခြားလူကြီးသူမ ပညာရှိ သုခမိန်တွေ ဟာ သူနေရာနဲ. သူ ၊ သူချိန်
ကာလ သူအခြေအနေနဲ့ သူပြောစရာပြောဟောစရာ ဟော ခဲ့ကြသူတွေပါ၊ နားထောင်သူရှိ
တယ် နားမထောင်သူရှိတယ် သူတို. အသက်ကိုရန်ရှာသူတောင်ရှိတယ် ၊ အောင်မြင်သူတွေ မအောင်မြင်ဘူး ၊ သူတိုအားလုံးဟာ သမိုင်းမှာ ထင်ရှားသူတွေချည်းပါဘဲ ။
အမြဲသတိရနေရမဲ့ အချက် (၂၄) ချက်
သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာ လောကကြီးအတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုပါ။
သင်ဟာ ပြိုင်စံကင်းတဲ့ လူတစ်ဦးပါ။
သင့်ဘဝဆိုတာ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နေ့ရက်များစွာကို တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ရက်သာလျှင် အသုံးချပါ။
သုခတွေကိုသာတွေးပြီး ဒုက္ခတွေကို မေ့ထားပါ။
ရေးသမျှစာ ၊ကဗျာတွေကို စုစည်းပြီးPDF ( E-book) စာအုပ်လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ - ရွှေအိမ်စည်'s photo.
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ အခုအင်တာနက်မှာ ခတ်စားနေတဲ့ Ebook (PDF BOOK)
စာအုပ်လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ အလကားရတာမလို့အင်စတောလုပ်ပြီးရင်
တခါထဲ တန်းသုံးရုံပါ စာရေးဆရာတွေအနေနဲ့မိမိတို့ ရေးထားတဲ့ကဗျာပေါင်းချုပ်
၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်လုပ် အင်တာနက်မှာ တင်ပေးမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူတွေကို ပိုပြီး
အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး
ကွန်ပျုတာထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်လိုရတာပေါ့ ။
Author: lubo601 | 5:24 PM | No မှတ်ချက် |
နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်တွေ ပေါ်က လက်ကျန် အနာတရများ
Author: lubo601 | 2:38 PM | No မှတ်ချက် |
ဗိုလ် နင့် March 28, 2014 at 1:58am
မဖြစ်မနေ တွေ့ကြရမယ် ဆိုတော့လည်း မမနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ပန်းပွင့်လှလှလေးပေါ်က ပွင့်ချပ်တွေကို နှမျောစွာ ခြွေချနေကြသလို စကားတွေကို တစ်လုံးချင်း၊ တစ်လုံးချင်း မကျွံကျအောင် ပြောနေရတာပါပဲ။ မမက လှပါတယ်။ အရင်ကထက်တောင် မမက ပိုလှလာသလိုပဲ။ မမ အရင်လိုပဲ မိတ်ကပ်ကို ပါးပါးလေး လိမ်းရုံလေး လိမ်းထားတယ်။ မမပါးတွေပေါ်က အိစက်နေတာထက် ပိုတဲ့ အထိအတွေ့ကို ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းတွေ သိကြပါဦးမလား။ မမရဲ့ မပိန်မ၀ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ခရမ်းရောင် ခပ်ပါးပါး အ၀တ်အစားတစ်စုံကို ၀တ်ထားတယ်။ မမ ဆံပင်တွေ အရင်လို နက်မှောင်ပြီး အိစင်းနေတုန်းပဲ။ တစ်ချက် တစ်ချက် အဲဒီ ဆံနွယ်တွေကို သိမ်းပြီး လည်တိုင် တစ်ဖက်ဆီကို ပို့လိုက်တိုင်း ဆံနွယ်တွေ ရှင်းလင်းပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ လည်တိုင်လှလှလေးကို ကျွန်တော် မနမ်းဘဲ မနေနိုင်ခဲ့ဘူး။
ဂျူး၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များ စုစည်းမှု (၆၀ အုပ်)
မိမိကွန်ပျူတာထဲမှာ ထရိုဂျန် (Trojan) ဒါမှမဟုတ် ဟက်ကာတစ်ယောက်ယောက် ၀င်ရောက်နေမှု ရှိမရှိ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းကောင်းတစ်ခုကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:15 PM | No မှတ်ချက် |
Tadaing Mwe's photo.
ဂါဒီယန်း ဦးစိန်ဝင်း မေး၍ အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဖြေသည်။
Vimuttisukha Bliss's photo.
(မေး) အရှင်ဘုရား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း၊ ဘုရားရင်ပြင်တော်တို့တွင် ဖိနပ်စီးလျှင် မည်သို့အပြစ်ရှိပါသနည်း၊ ဗိမ္ဗိသာရမင်း ဓားခွဲခံရခြင်းနှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်ပါသနည်း။
ဗိမ္ဗိသာရမင်း၏ ခြေဖ၀ါးကို သင်တုန်းဓားဖြင့် အခွဲခံရခြင်း၌ ရာဇ ကိရ ပုဗ္ဗေ စေတိယင်္ဂဏေ သဥပါဟနော အဂမာသိ-ရှင်ဘုရင်သည် ရှေးဘ၀တုန်းက စေတီရင်ပြင်တော်ဝယ် ဖိနပ်စီးလျက် သွားဖူးသတဲ့။
Author: lubo601 | 2:13 PM | No မှတ်ချက် |
သိပြီးသားအရာတွေကို ပြန်အစဖော်ဖို့ ခက်ခဲနေတာ၊ မှတ်မိအောင် ဘယ်လိုအာရုံစိုက်ရမလဲ စတာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ရှစ်စက္ကန့်အကြာ အာရုံစိုက်ပါ
သင်မှတ်မိချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားချင်ရင် အနည်းဆုံးရှစ်စက္ကန့် အချိန်ပေးပြီး အဲဒီ အရာပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်လိုက်ပါ။
Shwe Eaim Si‎၁၅။ဖတ်မိသမျှ ကျန်းမာရေး သုတစာများ
အပူဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ပူပြင်းသည့် အချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ၁၀၂-ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်မှ ၁၀၇-ဒီဂရီ ဖာရင်စိုက်အထိမြင့်တက်လာနိုင် သည်။လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ သာမန် အပူချိန်မှာ ၉၈.၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုအပူချိန် ၁၀၆-ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ရှိလျှင် ကြာရှည်ပါက ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။အပူချိန် ၁၀၉.၆ ဒီဂရီ ဖာ၇င်ဟိုက်ရှိလျှင် သေဆုံး နိုင်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် အပူထိန်းချုပ်မှု စနစ် ရှိရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူချိန် မျှတစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်တက်လာသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် မမြင့်တက်စေရန်ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
ရေးသမျှစာ ၊ကဗျာတွေကို စုစည်းပြီးPDF ( E-book) စာအု...
ဂါဒီယန်း ဦးစိန်ဝင်း မေး၍ အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရ...
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၈-၃)
ယောင်္ကျားလေးများ ကျရှုံးရသည့် မိန်းမများ၏ အစွမ်းထက် ...
ဗေဒင်နှင့် စိတ်ကုသခြင်းအပေါ် အသင်းတော်ရဲ့သဘောထား - ...
ရှိသမျှ စည်းစိမ် အကုန်ရောင်းလို့ ဆင်းရဲကလေးငယ်များ...
သန်လေးကို ဟာသစုစည်းမှု (၁)
သူ ဘယ်သူလဲ ....
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မရှိတဲ့ဘုရားကို ကိုးကွယ်နေကြတာလား?
Myanmar Youth Media Club 26 Mar 2014
သမီးဖတ်ဖို့ ----------- ကြောင်ပန်းရွက် ခူးကြသူများ
သမ္မတပုံကို လမ်းလေးမှာဆွဲမိလို့ ဘ၀ပြောင်းသွားတဲ့ မြ...
ဓာတ်ဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့အကြောင်း (၄၁) ချက်
လူမှုဆက်သွယ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒစ်ကေ...
ယောင်္ကျား ၊ မိန်းမတို့အကြောင်း
အချစ် မွေးနေ့မှာ ဖတ်ဖို့စာ
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဂျပန်ရိုးရာ ဘော်ဒီဆူရှီ
Myanmar Youth Media Club 23 Mar 2014
စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ - မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ရာဇ၀င်ဖတ်စာ (ဦ...
Warren Buffet ရဲ့ စကားများက နှစ်သက်စရာပါ
``` အီစွတ် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်´´´
ကျနော့် မိန်းမ ဒီစိတ်တွေ ကုန်နေတာ နှစ်နဲ့ချီနေပါပြ...
Googler တို့ ငွေရှာပုံ ရှာနည်း